Renew, Refresh, Rejuvenate at Kiroro Resort, Hokkaido | Japan travel news
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseJapan zokuhamba » Hlaziya, Hlaziya, Hlaziya eKiroro Resort, eHokkaido
Hlaziya, Hlaziya, Hlaziya eKiroro Resort, eHokkaido
I-Kiroro, into ebaluleke kakhulu entliziyweni ye-Hokkaido, iyavuya ukwazisa ukuba iphinde yavula iindwendwe ukusukela ngoJulayi 1. Emva kweenyanga ezininzi zokulungiselela, iKiroro iyavuya ukwamkela iindwendwe zibuye nezinyuso ezininzi eziqaqambisa indawo ekumgangatho ophezulu yehotele nolonwabo lwangaphandle. Ngobubanzi, indawo esecaleni esezintabeni zeYoichi, iKiroro ibonelela ngendawo yokufikela efanelekileyo kubahambi abakulungeleyo ukonwabela umoya omtsha, ukubukeka okumangalisayo, iindawo eziphangaleleyo kunye namava okuphila.
"Emva kweenyanga sihleli emakhaya, kuyasivuyisa ukwamkela iindwendwe kwindawo yethu entle eneentaba," utshilo uHirofumi Watanabe, Umphathi Jikelele wehotele iKiroro Resort. "Ngeentaba ezimangalisayo zentaba, imisebenzi eyahlukeneyo yangaphandle kunye nezinto ezintle ezinokuqwalaselwa, iKiroro yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kwabo bafuna ubunewunewu bangaphandle, impilo nokubahlaziya emva kwentwasahlobo enomngeni."
Ibekwe ezintabeni zeYoichi, iKiroro yindawo yeholide yeAlpine yamaxesha onke ebonelela ngendawo yokuhlala, ukutya kunye nokuthenga, izinto ezahlukeneyo zokuzonwabisa zangaphandle kunye neenkonzo zokuphumla ezikumgangatho wehlabathi. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, uKiroro ebesebenza ekuphuculeni ucoceko kunye neenkqubo ezisebenzayo ezihlangabezana okanye ezigqitha kwizikhokelo ezitsha kunye nemigangatho ebekwe ngoorhulumente basekhaya nabesizwe.
Ukuseta kwendalo kwezeMpilo kunye neNtlalontle
Ihlobo kwiintaba zeYoichi liza namathuba emisebenzi eyahlukeneyo yangaphandle, kubandakanya ukufikelela ekuhambeni, ukuhamba ngebhayisikile, iingxangxasi, intenetya, ipaki yegalufa kunye nokutyela ngaphandle. I-Kiroro ibonelela ngeendwendwe ngamava endalo eenkwenkwezi ezintlanu, kubandakanya iipakeji kunye nohambo losuku olukhuthaza impilo nokuba sempilweni. Ukongeza, ilali yaseKiroro inesithili sokutyela esidlamkileyo esinendawo zokutyela kunye nemivalo ebonelela ngezihlalo zangaphandle, ezilungele ukuhla kwezentlalo. Indawo yokuhlala kwihotele i-The Tribute Portfolio iya kubakho iivenkile ezithengisa ezibonelela ngeziqhamo nemifuno yaseHokkaido.
I-Kiroro ibonelela ngokukhethwa kwezonyuselo kunye neephakeji ezinamandla kubandakanya:
Iphakheji yeKiroro Premium BBQ - Yonwabela i-BBQ yangaphandle emnandi enezona ntlanzi zasemanzini ezilungileyo zeHokkaido kunye nenyama eyosiweyo kwaye wakhonza kunye namaxesha onyaka, imifuno yasekhaya kunye needyunivesithi ezimnandi. Ifumaneka nge-11 kaJulayi ukuya ku-Agasti 31. Iphakheji ibandakanya indawo yokulala abantu abadala ababini, isidlo sakusasa, isidlo sakusasa seBBQ kunye neOnsen yemihla ngemihla. Ukunikezelwa ngokuqala nge-JPY 13,252 lundwendwe ngalunye, iindwendwe ezongezelelweyo zongezwa. I-BBQ iqala kuphela kwi-JPY 4,800 (yabantu abadala) kunye neJPY3,300 (abantwana).
Inqanawa yeOtaru -Uhambo lokuhamba ngenqanawa ngosuku nge-Otaru Canal, etyebile ngembali kunye nokuthandana, igqityiwe ngee-canapes kunye ne-cocktail. Ukunikezelwa ngo-Agasti 31 ukusuka kwi-JPY17,000 ukuya phambili, iphakheji ibandakanya indawo yokuhlala ebusuku, ukuthuthwa ukuya / ukusuka e-Otaru Port, uhambo lwemizuzu engama-90 yokuhamba ngenqanawa kunye neetapile kunye nesiselo esinye. Kwiindwendwe ezithenga uhambo lokuhamba ngenqanawa, iphakheji iyafumaneka ukusuka kwi-JPY4,800 ukubheka phambili kwiindwendwe zabakhenkethi baseKiroro kunye ne-JPY 8,400 yeendwendwe ezingahlaliyo.
Hlaziya umsebenzi Hlaziya kwaye uhlaziye ngokujonga ubuhle bangaphandle beentaba zeYoichi ngale phakheji yokubaleka ebandakanya ukuqasha ibhayisekile kunye nohambo lokuhamba olukhokelwayo kwiingxangxasi zalapha. Unikwe ukusuka nge-23 kaJulayi-nge-11 ka-Okthobha, ukusuka kwi-JPY2,000 ukuya phambili, kunye nemisebenzi kubandakanya neyure e-1 yokuqeshisa ibhayisikile kunye nohambo lokukhokelwa kwempompo.
Iphakheji yesikhokelo sokuqhuba iKiroro - Jonga uhambo olwahlukileyo lwendlela eKita-Shari, indawo entsha ekufuphi naseSapporo. Indawo yohambo oluya eKita-Shari inika ubuhle bemimandla eselunxwemeni, iidolophu ezinomtsalane kunye neelali, ngenxa, iwhiskey kunye nokungcamlwa kwewayini, kunye nokutya kwaselwandle okutsha okuvelisiweyo kunye nemveliso evela kulo mmandla. Inkqubo ye- Iphakheji yesikhokelo sokuqhuba iKiroro icebisa iindlela ezintathu eziphambili zeendlela zokuqhuba ezilungiselela abahambi abafuna iindlela ezahlukeneyo zokufumanisa ubuhle bonxweme lwaseHokkaido kumantla eShiribeshi. Iindwendwe zinokufumana uluhlu olubanzi lwemisebenzi kunye nemiboniso bhanyabhanya evela kwiKita-Shiri Driving Guidebook kwaye zicwangcise iholide enemveliso kunye nabahlobo kunye nosapho. Ukunikezelwa ngoNovemba 11. Iphakheji ibandakanya indawo yokulala ebusuku, incwadi yokuqhuba yaseKita-Shari, isidlo sakusasa semihla ngemihla kunye neOsensen yemihla ngemihla. Inikezelwe ngokuqala nge-JPY 13,000.
Thenga iphakheji ye-Ski yobusuku obu-5 kwaye ufumane ukuPasa kwesizini - Zuza indlela yakho eya kwikiriyodi yexesha laseKiroro yokupasa xa uhlala ubusuku obuhlanu okanye nangaphezulu ngexesha lonyaka weskiki.
Iiphakheji ezingakumbi zinokufumaneka kwi www.kiroro.co.jp.
Indawo ye-5-Star Mountain Resort
I-Kiroro ibonelela ngendawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu ukusuka kwindawo yokuphumelela amabhaso ehotele ukuya kwindawo yabucala, indawo yokuhlala ski-to-door. IKiroro ibonelela ngeehotele ezimbini ngaphakathi kwipotifoliyo yaseMarriott: ISheraton Hokkaido Kiroro Irizothi enamagumbi eendwendwe ali-140 kunye neendawo zokutyela kunye neeresityu ezibini kanye emazantsi ethambeka; kwaye I-Kiroro, ihotele yokuHlawulelwa kwePortfolio ngamagumbi okundwendwela angama-281 kunye nama-suites anikezela ngee-vistas zeentaba kwigumbi ngalinye, amaziko akumgangatho wehlabathi kunye neendlela ezintlanu zokutyela. Esandula kuvulwa Yu Kiroro yingqokelela ephumelele amabhaso ezindawo zokuhlala ngasese ezikhethiweyo kwindawo yentaba. Indawo yokuhlala yasimahla ibonelela ngeenkonzo zepremiyamu, ezinje nge-ski valet, indawo yendalo yangaphakathi-yangaphandle, inkonzo yeeyure ezingama-24, iziko lokomelela kunye negumbi lokuphumla, kunye nokutya yonke imihla.
Indawo yonke eyiKiroro Resort iqhagamshelwe yindibaniselwano yeGondolaway Express ye-gondola-chairlift ebaleka iphambi kwehotele iThe Tribute Portfolio kunye neendawo ezintsha zokuhlala zaseYu Kiroro eSheraton Hokkaido Resort.
Ngolwazi oluthe kratya kunye nokubhukisha utyelelo, nceda undwendwele www.kiroro.co.jp
Malunga neKiroro Resort
I-Kiroro yindawo yokuqala yokubhenela kwindawo ekuhlala kuyo entliziyweni yeHokkaido, Japhan. Imvelaphi eyaziwa zii-ski aficionados ngomgubo ogqibeleleyo, ixesha lonyaka lokuskiya kunye nemigca emide yokuphakamisa, iKiroro ivela njengendawo ekumgangatho wehlabathi kunye nenye yezona ndawo zibalaseleyo zexesha lonke eAsia. Ngamahotele amabini eenkwenkwezi ezintlanu kunye ne-ski-ski-ski kwiindawo zokuhlala zabucala, iKiroro yindawo efanelekileyo yokubalekela iintsapho, izibini kunye neendwendwe zayo yonke iminyaka. Ngolwazi oluthe kratya malunga neeholide kunye namava, ndwendwela www.kiroro.co.jp. Ngolwazi oluthe kratya malunga neendawo zokuhlala zabucala zaseYu Kiroro, ndwendwela www.yukiroro.com